🥇 ▷ 7daas shay ayaa hadda ku jira ciyaarta, laakiin dib ayey ula soo noqon doonaan WoW: Classic ✅
7daas shay ayaa hadda ku jira ciyaarta, laakiin dib ayey ula soo noqon doonaan WoW: Classic
Akhrinta maqaallada ku saabsan sii-daynta soo socota ee Dagaalkii Adduunka: Classic, waxaan ka heli karnaa aragti ah in farqiga u dhexeeya WoW casriga iyo Classik inta badan in Classic wax ka maqan yihiin.
Ma jiraan wax ka sii qaldanaan kara. Waxaa jira waxyaabo ku soo noqon doona World Warcraft Classic, oo aan ka jirin ciyaaraha casriga ah sannado. Waa kuwan shan ka mid ah.
Intii lagu gudajiray horumarinta ciyaarta, meelaha qaar waxaa lagu bedelay aqoonsi ama burbur. Isbeddelkii ugu horreeyay ee noocan oo kale ah wuxuu dhacay inta lagu gudajiray cataclysm lagu soo bandhigay lifaaqa… Cataclysm. Weerarkii bahalkii weynaa wuu ka qaaday Azeroth. Isbeddelkii labaad wuxuu dhacay intii lagu jiray labadii dheeri ee la soo dhaafay, iyadoo weerarka loo yaqaan ‘madani titan’ iyo ka dib dagaalkii labada dhinac dhex maray.
Markaa Teldrassil, Undercity, Auberdine, biyo xidheenka Loch Modan, dekada Menethil iyo meelo kale oo aadan ka heli doonin nooca casriga ah ee ciyaarta ayaa soo laaban doona.
Qof waa inuu u dhintaa sheekada si horay loogu socdo. Ciyaarta Qoraalka shaashadaha carshiyadu ma ahayn kii ugu horreeyay ee soo saarta – waxay ahayd qaanuun loo isticmaali jiray boqollaal sano. Abuurayaasha Blizzard sidoo kale si guul leh ayey u isticmaaleen, iyaga oo laayay dabeecad muhiim ah waqti ka waqti.
Bolvar Fordragon wuu soo laaban doonaa, kaas oo markii dambe door muhiim ah ka ciyaari doona wakhtigii Wrath of the Lich King. Tababaraha Deadmines Edwin Van Cleef ayaa soo laaban doona. Waxaa jiri doona jiidis ilaalo ka haya Duskwood, Feralas iyo Ashenvale.
Waa adag tahay in la yiraahdo Azeroth waa siyaasad deggan. Mowqifka Horde hoggaamiyeyaasha, waxaa jiray isbadallo badan, oo markaa Isbahaysigu wuxuu beddelayaa… xulafadii markii ay dhacayeen. Fiiri hoggaamiyeyaasha caadiga ah ayaa ina xusuusin doona tan.
Guud ahaan wuxuu ku yaal madaxa Horde, Vol’jinnna waa ku xiga. Hoggaamiyaha Tauren Cairne wuxuu sidoo kale u muuqan doonaa isagoo nool oo dhammi.
Marka loo eego axdiga, ma jirin baaris aan micno lahayn oo loogu raadin jiray Boqorka Variana ee Stormwind. Laakiin sababta ay sidaas u tahay, qorshihii “Vanilla” jawaabihii – boqorka waxaa si ku meel gaar ah loogu bedelay dhalinyaro da ‘yar Anduin, qolkiisa carshiga waxaa ku jira qof kale oo dahsoon.
Gabi ahaanba waan iska ilownay, laakiin mar waxaan u baahanahay furayaasha si aan u furno goobo kala duwan Ma lihid furaha – ma galine. Waqtiyada qaar, Blizzard, oo raba inuu badbaadiyo boos ciyaartooyo qiimo leh boorsooyinkooda, wuxuu meel gaar ah ka dhex abuuray alaabada, oo loo yaqaan keyring – giraan fure ah.
Maxay ahaayeen furayaasha? Meesha laga soo galo meesha (tus.
Maqnaashaha muuqaalka gaarka ah sida ‘raadinta koox’ ama ‘raadinta duullaan’, dadku waxay ku wada kulmayeen sheekaysiga. Oo waxay ku ganacsan jireen alaabada sheekaysiga. Guud ahaanna waxay qoreen ciyaartoy cusub oo sheekaysanaya.
Waxaan rajeynayaa in waqtiyadan ay soo laaban doonaan – Waxaan jeclaan jiray inay ciyaartoydu sameystaan ​​beel oo ay fiicantahay in ereyo dhowr ah lala yeesho kuwa kale kooxda.
Qoondeyn toos ah bililiqeysiga qof walba ayaa jirta. Iyada oo la socota Classic, isku aadka ayaa soo noqon doona, iyada oo la yaaban haddii qof kasta uu si sax ah ugu riixay “Baahan” (oo la micno ah inay u baahan yihiin qalab aan kala sooc lahayn) badalkeed “Guulleed”.
Guilds, sida xilliyada vanilla, waxay dejin doonaan xeerar la qaybsanayo bililiqada. Waxa kale oo jirta inay jiraan nidaam kale oo mudnaan gaar ah loogu yeero oo loo yaqaan DKP (Dilka Dhibcaha Dilka), oo u qoondeeya qalab ka wanaagsan kuwa ka qaybqaata dhaqdhaqaaqa ganacsiga.
Qaarkood waxay muddo dheer u raadinayeen xulasho muhiim ah habka aan u horumarin karno dabeecaddeena. Geedka Talent wuxuu ku soo laaban doonaa Classic, isagoo kuu oggolaanaya inaad meeleeysid dhibco aad heshid markii aad sare u kacdo. Muhiimad ahaan – xirfadaha qaar ee la helay waxay kuxiran yihiin kartida aan u xilsaarnay dhibco kahor. Aad bay u dhib badneyd in qulqulatooyinka dhexdooda ay jiraan waxa loogu yeero sayidyadeedka fasalka – sayidyada fasalka oo kaala taliya sida loo dejiyo.